Ikhamera ephindwe kabini ye-iPhone 8 Plus iya kuba nokuzinzisa okuphindiweyo okubonakalayo | Iindaba zeGajethi
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu esinokuzifumana kwiimodeli ezintsha ze-iPhone yile ichaphazela imodeli ye-Plus, imodeli esisinika iikhamera ezimbini ezisivumela ukuba sithathe iifoto ezimnandi ngokudibanisa imvelaphi, sisebenzisa i-angle ebanzi kunye Iilensi zomnxeba. Kuyabonakala ukuba khange kubekho sizathu saneleyo sabasebenzisi abanomdla wokuhlaziya iitheminali zabo benze njalo kwaye njengoko besikwazisile kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, uqikelelo lwentengiso lwenyanga kaNovemba nangoDisemba luye lwehla kakhulu. Ukuba lolunye lwezona ziphuculo zibalulekileyo ezifunyenwe yi-iPhones kule minyaka idlulileyo, iApple ifuna ukuphucula obu buchwephesha kunyaka olandelayo.
Okwangoku iApple ibonelela ngokuzinzisa okubonakalayo kwilensi enekona ebanzi, eyenza kube nzima ukuthwebula imifanekiso okanye iividiyo xa usondeza. Ukuzama ukulungisa le ngxaki, I-Apple inokongeza enye i-optical stabilizer kwi-lens yefowuni, njengoko kuxeliwe ngumhlalutyi we-KGI wezokhuseleko uMing-Chi Kuo. Okwangoku xa sisebenzisa iilensi zomnxeba, kufuneka sibe ne-iron pulse ukuba asifuni ukuba umfanekiso uphume ungacacanga, uqhelekile okanye ungaphandle kwesikwere, into eza kusonjululwa ngu-Apple kunyaka olandelayo.
Amanye amarhe anxulumene neemodeli ezilandelayo ze-iPhone aqinisekisa ukuba inkampani esekwe eCupertino inokubandakanya ikhamera ephindwe kabini kuzo zonke iimodeli eziqaliswa yinkampani kwintengiso ye-2018, Iikhamera ezinokudibanisa i-optical stabilizer kuzo zombini iilensi, ukuba uqikelelo lomnye wabahlalutyi abaphambili be-Apple, uMing-Chi Kuo, ekugqibeleni luzaliseka. Okwangoku, xa kusekho ngaphezulu kweenyanga ezili-10 i-Apple ukuba ibonise i-iPhone entsha, eyakuba sisikhumbuzo seminyaka elishumi, maninzi amarhe ajikeleze esi sixhobo, amarhe angenakuqinisekiswa de iApple ivelise i-iPhone entsha NgoSeptemba kunyaka olandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ikhamera emibini ye-iPhone 8 Plus iya kuba nokuzinzisa okuphindiweyo
Ngaphandle kokusela awazi ukuba ungayipapasha njani enye into oyithweleyo ngobuhlanya bakho be-iPhone 8 ukuze uyazi kuqala uza kuza umbono wesibini. Ukusuka apho i-S mhlawumbi awuyazi naloo nto.
Kuya kufuneka ndingakruquki xa uyifunda. Kwakhona, ukuba wazi okuninzi malunga ne-iPhone kunye neeprojekthi ze-Apple ezizayo ezinxulumene nesi sixhobo, kuya kufuneka uyazi ukuba eyona nto inokwenzeka kukuba ii-iPhone 7s azizukumiliselwa kodwa i-iPhone 8. Apha asiyileli iindaba, ukuba ukufumana okungakumbi uzokwazi ukuba ndithetha ntoni, ukuze ukwazi ukugxeka kufuneka waziswe.
Ngaba i-iPhone 8 yam iyabuyisa? Ndicinga ngaphambi kokuchaza ukuba, kuya kufuneka ulifunde kakuhle eli nqaku.
Onke amajelo eendaba akhethekileyo kunye nabahlalutyi emhlabeni bayavuma ukuba akuyi kubakho nguqulelo S.
Kuyimfuneko ukuba wazise ngokwakho ngaphambi kokuba ugalele ukugxekwa.
Itekhnoloji kunye nabantu abadala